MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA NOORWEEY ELKHOUND - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Noorweey Elkhound
Tia Noorwiijiga Elkhound
Liiska eeyaha Noorwiijiga Elkhound Mix
Reer Norwey Elkhound Gray
Noorwiijiga Elkhound Black
Nork Elkhound waa eey adag oo dhexdhexaad ah oo nooca Spitz ah. Jidhku wuu gaaban yahay oo si ballaadhan ayaa loo dhisay. Dhabarka ayaa toosan oo adag. Madaxa qaab-goobeedku wuu ballaadhan yahay dhegaha. Afku waa ka sii dhumuc weyn yahay salka, weyna taabanayaan laakiin hal dhibic, oo leh joogsi cad oo qeexan. Ilkaha waa inay ku kulmaan qaniinyada maqas. Indhaha dhexdhexaadka ah, ee u eg qaabka oval waa bunni madow. Dhegaha ayaa kor loo saaray madaxa, way adag yihiin laakiin waa kuwo dhaq-dhaqaaq badan. Laabta ayaa qoto dheer oo qiyaas ahaan ballaadhan. Lugaha ayaa toos uga muuqda xagga hore. Bawdada ovalku way yar yihiin oo way ku adag yihiin suuf adag. Dabada ayaa sare loo dhigay, si adag ayaa loogu duubay dhabarka. Caadi ahaan lugaha hore ee qoyaanku waxay leeyihiin dhibco laakiin kuma xirna dhabarka. Cimilada u adkaysta, jaakad laba jibbaaran ayaa adag oo adag. Koodhku waa cawlan yahay talooyin madow iyo khafiif khafiif ah oo hoosta ka hooseeya oo leh maaskaro madow, dhegaha, iyo cirifka dabada. Ey-dhaqatada reer Norway ee Elkhound waxay ku dhashaan madoow waxayna cirroobaan markay gaaraan qiyaastii hal toddobaad markay gogoshoodu koreyso.
Elkhound-ka Norwey waa mid feejigan, geesinimo leh, daacad ah oo saaxiibtinimo leh. Inkasta oo qaarkood laga yaabo inay xoogaa ku yaraadaan shisheeyaha, waxay salaami doonaan qoyska iyo asxaabta ay ku ogtahay xamaasad. Docile, aamin ah oo firfircoon, waa saaxiibbo wanaagsan oo carruurta ah. Sida eeyaha kale ee Arctic, Noorwiijiga Elkhound wuxuu leeyahay maskax isaga u gaar ah oo si cadaalad ah u madax banaan, si kastaba ha noqotee wuxuu jecel yahay qoyskiisa. Waxay leeyihiin dabeecad aad u fiican, waana nadiif nadiif marka la barbar dhigo noocyada kale. Way adkaan kartaa in la addeeco tareenka. Waa muhiim inaad ku adkeysato eeygan, muujinta hoggaan xirmo wanaagsan . Waxay u baahan yihiin adag, laakiin debecsan edbinta . Saacad dabiici ah iyo ilaaliyaha eyga . Noocani wuxuu jecel yahay inuu meeraysto oo uu ciyo. Waxaa loo soo saaray inay noqdaan ugaadhsato ugaarsada ugaadhsigooda, iyagoo si joogto ah uga ciyey ilaa ugaarsade yimid. Haddii ciqahoodu noqdaan kuwo waswaas ah waa in la baro in ku filan ka dib markay hal mar kuu soo sheegaan, waa waqtigii la aamusi lahaa. Caddaalad ahaw marka tababarka this, iyo fahamsan yahay inay tahay canine, aadane maahan oo eyda ula dhaqan. Haddii aysan 100% ka hubin waxa ay yihiin Meesha adduunka laga raaco waxay yeelan karaan u janjeera inay la dagaallamaan eeyaha kale. Elkhounds waa ugaarsade mana ahan in kali lagu aamino mid yar xayawaanka aan xayawaanka ahayn sida hamster , Jiirka xayawaanka , jiir ama doofaarka guinea , si kastaba ha noqotee qaar baa la ogaa inay la heshiiyeen markii milkiilayaashu ka shaqeynayeen inay u sheegaan eeyga in xayawaanka yar yar uu alfa dusha ka saaran yahay. Waxay la heshiin karaan bisadaha qoyska. Iyadoo aan ku filneyn jimicsi maskaxeed iyo / ama jir ahaaneed waxay noqon karaan kuwo sarreeya. U hubso inaad ka dhigto cidhibta eeyga markaad lugeyneyso dhinac ama gadaashaada, marna hore, si aad u xoojiso aadanaha waa alfa ka badan hogaamiyaha baakadka eyga ayaa marka hore tagaya.
meeqa eeyo ayaa dad weyne yeelan karaan
Dhererka: Ragga 19 - 21 inji (48 - 53 cm) Dumarka 18 - 20 inji (46 - 51 cm)
Miisaanka: Ragga 50 - 60 rodol (23 - 27 kg) Dumarka 40 - 55 rodol (18 - 25 kg)
Ku soo dhowaanshaha sinta dysplasia, pyotraumatic dermatitis iyo PRA. Mararka qaarkood la arko waa Fanconi syndrome. Miisaan buu ku fududaa, haku badin quudinta.
Noorwiijiga Elkhound wuu ku fiicnaan doonaa guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Waa mid si firfircoon gudaha uga shaqeeya oo ugu fiican ugu yaraan leh daarad weyn. Elkhounds waxay doorbidaan cimilo qabow.
Noorwiijiga Elkhound waa eey firfircoon oo firfircoon kuna firfircoon dhaqdhaqaaqa badan. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta, dheer, kacsan socod ama orod . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha. Waa inuu lahaadaa ugu yaraan saacad jimicsi maalintii. Waxay ku raaxeysan doontaa orod ku ag socda baaskiilkaaga ama runti fiican oo duurka ku jira, laakiin xusuusnow in eeyadan ay jecel yihiin inay dhex mushaaxaan. Haddii ay soo qaadaan caraf xiiso leh, way iska indho-tiri karaan, ama xitaa kuma maqli doonaan markaad u yeerto.
Koodhka adag, qalafsan, cimilada aan fiicnayn ayaa fududahay in la xannaaneeyo. Waa in si joogto ah loo cadaydo, iyadoo taxaddar dheeraad ah la siinayo inta eygu daadinaayo jaakadiisa cufan. Marka eygu daadanayo, timaha dhintay waxay ku dhegan yihiin timaha cusub. Timaha dhintay waa in lagu qaadaa burushka caagga ah ama shanlo alwaax ah oo leh taxane laba ilkood oo bir ah. Burushka iyo shanlooyinka ujeedadaas kaliya ayaa lagu iibiyaa dukaamada xayawaanka. Maydho oo keliya markii loo baahdo, maadaama ay ka saareyso saliidaha dabiiciga ah ee maqaarka ku jira. Sida eeyaha kale ee Arctic, iyagu ma laha urta caadiga ah ee timaha eeyga. Koodhku waa biyo iyo wasakh u adkaysata labadaba. Noocani waa daadshe xilliyeed culus.
german adhijir stern bernard mix puppy
Noorwiijiga Elkhound wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Scandinavia waana mid ka mid ah noocyada ugu faca weyn ee ay kumanaan sano jirsatay wuxuuna jiray ilaa xilligii dhagaxa. Qalfoof la mid ah midka maanta loo yaqaan 'Elkhound' ee Noorwiijiga oo laga soo bilaabo 4000 ilaa 5000 BC ayaa la helay. Si waxoogaa aragti ah loo dul saaro, eeyadan ayaa jiray illaa iyo markii uu ninku ugaarsaday qoryaha dushiisa oo uu ku noolaa godadka. Waxay u shaqeeyeen sidii ugaarsi iyo eey ilaalin ah oo loogu talagalay Vikings. Eyda waxaa loo adeegsaday ugaarsadeyaal waaweyn iyo kuwo yaryar oo dabagal ku haya xayawaanka sida moose, elk, bear, libaax buur, badger, lynx, yeolf, deer iyo bakayle. Eeyadu waxay raadin jireen meesha dhagaxa laga qodo oo ay ugaarsadaan ugaadhsadaha iyagoo qaylinaya, iyagoo neefka ku haya hareeraha ilaa ugaadhsigu yimaado. Elkhounds norwejiga ah ayaa urin kara wax u jira masaafo ka badan mayl. Eeyadu waxay u ekaadeen inay shaqeeyaan si ka wanaagsan habeenkii. Noocyada ayaa sidoo kale aad loogu qiimeeyaa sida eeyaha xajmiga ah. Xaaladda dagaal, Wasiirka Difaaca Norway wuxuu awood u leeyahay abaabulka dhammaan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Elkhounds. Waqtiyadii ugu dambeeyay, dabeecadda saaxiibtinimada leh ee la isku halleyn karo ee Elkhound waxay gacan ka geysatay ku guuleysiga meel ka mid ah guryo badan sidii xayawaan qoys oo la jecel yahay. Magaca 'Elkhound' waa tarjumaad toos ah oo laga soo qaatay magaceeda asalka ah ee Norwey 'Elghund,' oo macnaheedu yahay 'eyga mooska.' Noorwiijiga, 'elg' macnaheedu waa 'moose' iyo 'hund' macnaheedu waa 'eey'. Nooca ayaa markii ugu horreysay la soo bandhigay 1877 markii Ururka Ugaarsatada Norwey ay bilaabeen bandhigyo. Xisbiga AKC wuxuu marki uhoreysay aqoonsaday caarada sanadku markuu ahaa 1913. 1923dii, waxaa la sameeyay Naadiga Elkhound, waxaana si rasmi ah u aqoonsaday Naadiga Ingiriiska ee loo yaqaan 'Kennel Club'. Hibooyinka Elkhound qaar ka mid ah waxaa ka mid ah: ugaadhsiga, raad-raaca, daaqsinta, ilaalinta, ilaalinta, xaraashka iyo xamaasadda. Waxa kale oo jira a Madow Nork Elkhound taas oo loo aqoonsan yahay inay tahay nooc gaar ah, laakiin waxay ku dhowdahay isku mid nooc marka laga reebo midabka.
Waqooyiga, AKC Hound
'' Tia Noorwiijiga Elkhound ayaa socod ku maqnaa Bruno Feeryahanka . Waxay ahayd habeen 80-digrii ah Tia-na waa kulul. Waxaan gadaal ka marnay barafka barafka Tia waxay aragtay wax u eg jannada iyada! Buul baraf ah ayaa laga xaaqay dhagaxa! Tia waxay xoqday sankeeda dhammaantiis, iyadoo ku rogaya qabowga. Iyada iyada barafka maalinta kulul wuxuu ka fiicnaa saxarada faraska! '
Tia ah Gurmadka Elkhound ee reer Norway at 4 sano jir ah oo jiifaya cawska
'Sophie, oo halkan lagu muujiyey isagoo qaangaar ah, waa Elkhound weyn oo reer Norway ah. Waxay isu rogtay wehel wanaagsan iyo eey si fiican u dhaqan leh. Waxay jeceshahay fuulista dhagxaanta iyo ku ciyaarida barafka. Sophie waxay ku nooshahay Kanada waxayna jeceshahay jiilaalka qabow. Waxay si raaxo leh ugu seexan doontaa banaanka barafka -30 darajo C (-22 Fahrenheit). '
Sophie Noorwiijiga Elkhound oo ah eey yar oo jirta 7 bilood oo jiifta sariirta
'Kani waa Apollo, 2-sano jirkeena noorwiijiga ah ee Elkhound. Apollo waxay ka timaaddaa xariiqa dhiigga ee horyaalnimada. Isagu waa eey daacad ah, oo kalgacal leh, oo wuxuu si fiican ugu raaxeeyaa xubnaha qoyskiisa ee aan kaniisadda ahayn (bisadaha iyo caleemaha). Wuxuu leeyahay astaamo badan oo caan ah oo ku saabsan noocyadiisa, oo ay ku jiraan inuu yahay ugaadhsade ugaadhsade kulul iyo xayawaan aan kala joogsi lahayn markii xayawaan ama aadane aan la garanayn uu ku sugan yahay dhulkiisa. Isagu waa ilaaliye fantastik ah, laakiin weligiis cidna wax kuma yeeli doono. Wuxuu jecel yahay barafka, wuxuuna u ordaa sida eey u jiidaya afkiisa furan barafka inta lagu jiro duufaanta. Wuxuu kaloo jecelyahay inuu ku ciyaaro harooyinka iyo durdurrada bilaha kulul. Wuxuu nala deggan yahay bartamaha Massachusetts. '
7 bilood jir retriever
Apollo Noorwiijiga Nolosha Elkhound ee barafka ku jira
Apollo oo ah noorwiijiga norwiijiga ah ee Elkhound oo ku raaxeysanaya biyaha
Gunnar oo reer Norwey ah Elkhound oo ah eey 3 bilood jir ah— 'Gunnar oo reer Norway ah Elkhound waa eey aad u caqli badan oo firfircoon, wuxuu wax walba u qaban doonaa daaweyn. Waxaan jecel nahay inaan dhahno Gunnar WALIGAA wuu gaajaysan yahay wuxuuna jecel yahay inuu la joogo dadkiisa! Waxa kaliya ee Gunnar uu ka jecelyahay ka dabagalka daba dhilifyada ayaa ah inuu kula seexdo dad aad u fara badan. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kubaddan yar ee dhogorta leh ku soo biirno qoyskeena! '
Gunnar oo reer Norway ah Elkhound oo ah eey 3 bilood jir ah
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ku saabsan Noorwiijiga Elkhound
Sawirada Elkhound ee reer Norway 1
isku darka shaybaarka amerikanka
timo dheer isku darka dachshund chihuahua
xadka collie mix iyo adhijirka Australia
1 sano jir bernese eey buurta